Coronavirus miyaa amaan ah in diyaarad lagu safro? | Wararka Safarka
Coronavirus: Ma nabad baa in lagu safro diyaarad?
Luis Martinez | 29/06/2021 11:21 | Duulista, Duulimaadyada
Haddii ay tahay inaad si joogto ah u duusho, waxaa hubaal ah inaad waligaa is weydiisay haddii, coronavirus-ka, ay nabad tahay inaad diyaarad ku safarto? Su'aashani sidoo kale waxay ka mid tahay kuwa ugu badan ee maanta la soo qaado fasaxyada xagaagaMarka malaayiin dad ah ay qorsheynayaan safar ay ku raaxeystaan ​​nasasho aad ugu qalantay ka dib bilooyinkan walaaca badan, halkan waa maqaal oo leh talooyin guud oo kaa caawiya inaad u diyaar garowdo safaradaada waqtigan dhibaataysan.
Jawaab ahaan, waxaan kuu sheegi doonnaa haa, coronavirus-ka ayaa amaan ah in diyaarad lagu raaco. Si kastaba ha noqotee, maaddaama sheegashooyinka ay tahay in la caddeeyo, waxaan kuu sharraxeynaa sababaha aad ugu duuli karto si fudud qaraabo. Oo waxaan dhahnaa qaraabo maxaa yeelay virology ma aha saynis sax ah. Qofna damaanad kama qaadi karo inaad gebi ahaanba ka xor tahay infekshanka. Waa halkii taas, sida laga soo xigtay khubarada, safarka diyaarad, waxaad leedahay fursadaha ugu yar ee lagu qaadsiin karo.
1 Coronavirus: safarka diyaaradda waa aamin
1.1 Sida hawadu ugu dhex wareegto qolka diyaaradda
1.2 Tallaabooyinka kale ee kahortagga ah ee diyaaradaha looga soo horjeedo Covid-19
2 Tilmaamo looga hortagayo faafitaanka coronavirus markaan duulayno
2.1 In garoonka diyaaradaha
Coronavirus: safarka diyaaradda waa aamin
In kastoo wax badan horey looga ogaa cudurkan cusub, haddana weli waxaa jira waxyaabo laga ogaan karo. Anaga oo aan sii kala fogaanayn, weli ma ogin xitaa halka ay asal ahaan ka soo jeedday. Waxaas oo dhan, waxa ugu fiican waa inaan u oggolaanno khubarada inay ka hadlaan su'aasha ah, haddii lala socdo coronavirus, waa ammaan in diyaarad lagu safro.
Runtii, waxaa jiray xarumo badan oo takhasus gaar ah leh oo u xilsaarnaa darsida arinta. Si kastaba ha noqotee, sharaftiisa weyn awgeed, waxaan u sharxi doonnaa fikradda cilmi-baarayaasha Hindisaha Caafimaadka Dadweynaha ee Atlantic, noole ka mid ah Jaamacadda Harvard u heellan barashada, si hufan, halista caafimaad ee safarka hawada.
Kuwani waxay sabab u siiyeen shirkadaha diyaaradaha, oo iyagu in badan difaacay badqabka safarka hawada xilliyadan. Sida ay qabaan khubarada Harvard suurtagalnimada in cudurka lagu qaado diyaarad waa "Ku dhowaad ma jiro".
Si ay u gaaraan gabagabadan, waxay la shaqeeyeen shirkadaha duulimaadyada adduunka hogaamiya, laakiin sidoo kale garoomada ugu mashquulka badan iyo, dabcan, mutadawiciin iskood isu xilqaamay inay safraan. Waxaas oo dhan si loogu bixiyo aragti dhammaystiran oo ku saabsan halista duulista.
Mid ka mid ah wada-hawlgalayaasha hay'adda Harvard, Leonard marcus, ayaa sheegay in halista gudbinta fayraska ee diyaaradda ay aad u yareyso astaamaha sagxadda duulimaadka, hawo qaadashada iyo nidaamka wareegga hawada iyo adeegsiga waji-shareerka. Si aad si fiican ugu sharaxdo, waxaa lagama maarmaan ah inaan kaala hadalno sida ay ugu dhex wareegto hawada diyaaradaha.
Sida hawadu ugu dhex wareegto qolka diyaaradda
Khubarada ayaa si adag u darsay nidaamka qulqulka hawada ee gudaha diyaaradaha. Gunaanadkiisuna wuxuu ahaa in ay jirto suurtagalnimo yar oo aan ugu nugul nahay 'Covid-19' iyaga marka loo eego "meelaha kale sida dukaamada waaweyn ama maqaayadaha."
Qolalka diyaaradaha ayaa leh naqshad gaar ah oo had iyo jeer nadiifisa hawada. Xaqiiqdii, gudaha gudaheeda waa la cusbooneysiiyaa labadii ama seddexdii daqiiqaba, taas oo macnaheedu yahay inay sidaas sameyso qiyaastii labaatan jeer saacaddii. Cayrinaya hawada ay rakaabku ceyrinayaan iyo Waxay ku beddelaysaa midka cusub ee ka imanaya bannaanka iyo sidoo kale mid kale oo hore loo nadiifiyey.
Si tan loo sameeyo, waxay isticmaashaa waxyaabo kala duwan. Tan ugu muhiimsani waa jidka ay raacdo hawada galaya qolka. Waxay ka sameysaa korka waxaana loo qaybiyaa qaab xaashiyo toosan saf kasta oo kuraas ah. Sidan oo kale iyo kuraasta laftooda, waxay ku abuureysaa carqalad difaac safafka iyo rakaabka. Ugu dambeyntiina, hawadu waxay ka baxaysaa qolka iyada oo loo marayo sagxadda dhulka. Qayb ka mid ah ayaa loo eryayaa dibadda, halka qayb kalena ay u socoto nadaafadaynta.
Nidaamkani wuxuu leeyahay Miirayaasha HEPA (Xarigga Waxqabadka Karti Sare), isla kuwa loo isticmaalo qolalka qalliinka ee isbitaalka, kuwaas oo waxay awoodaan inay xajistaan ​​99,97% wasakhda qayb ka mid ah bayoolojiga sida fayraska iyo bakteeriyada.
Marka la nadiifiyo, hawadan waxaa la isku daraa 50% iyo hawo kale oo ka baxsan taas oo iyadana la cadaadiyay, la kululeeyay sidoo kalena la sifeeyay. Ugu dambeyntii, wax walba waxay ku soo noqdeen qolka rakaabka. Laakiin taxaddarrada lagu qaado hawada gudaha diyaaradda kuma eka halkaa. Leh diyaarinta fadhiga, kuwaas oo dhammaantood ku wada jira jihayn isku mid ah, waxay xaddidayaan is-dhexgalka fool-ka-foolka ah ee u dhexeeya rakaabka muddada duulimaadka.
Marka la soo koobo, isku darka nidaamkan sifaynta hawada, isticmaalka waji-shareerka iyo xeerarka jeermiska dila ee ay hirgeliyaan shirkadaha duulimaadyada ayaa saamaxaya yareynta masaafada u dhaxeysa safarleyda. Sida laga soo xigtay shirkadda Airbus, qaabkan, kaliya 30 sentimitir kala-goynta udhaxeysa waxay u dhigantaa laba mitir meelaha kale ee xiran. Laakiin shirkadaha diyaaradaha ayaa wali qaadaya talaabooyin kale oo ay ku ilaalinayaan nabadgelyada rakaabkooda.
Tallaabooyinka kale ee kahortagga ah ee diyaaradaha looga soo horjeedo Covid-19
Diyaarad garoon diyaaradeed
Dhab ahaan, shirkadaha duulimaadyadu waxay ku lug yeeshaan dhammaan shaqaalahooda iyo xarumahooda ka hortagga infekshinka coronavirus. Waxay qaateen dhammaan tilmaamaha ay dejiyeen Wakaaladda Badbaadada Duulista Hawada ee Yurub waxayna raaceen talooyinka masuuliyiinta caafimaadka ee wadan kasta inay u duulaan meelahaas. Waxay sidoo kale ku tababareen shaqaalahooda, labadaba dhulka iyo hawada, gudaha hab maamuuska nadaafadda oo ay ku taliyeen Ururka Caafimaadka Adduunka.
Sidoo kale, shirkadaha diyaaradaha waxay xoojiyeen nadiifinta iyo jeermiska sunta diyaaradahooda, sidoo kale shirkadaha ka masuulka ah garoomada diyaaradaha. Waxayna sidoo kale abuurtay hab maamuusyo cusub oo loogu talagalay in lagu ilaaliyo socotada laga soo bilaabo markay diyaaradda raacaan ilaa ay ka baxayaan garoonka diyaaradaha.
Tanina waxay noo horseedaysaa inaan kaala hadalno su'aal kale oo muhiim ah oo ku saabsan coronavirus iyo badqabka safarka diyaaradda. Waxay ku saabsan tahay waxa aan sameyn karno si aan uga fogaano infekshinka markaan duuleyno.
Tilmaamo looga hortagayo faafitaanka coronavirus markaan duulayno
Si aad u sharaxdo talaabooyinka aad qaadi karto iska ilaali inaad hesho Covid-19, waa inaan kala saarnaa dabeecadeena garoonka diyaaradaha iyo mida ay tahay inaan raacno mar diyaarada. Labadaba hal meel iyo meel kaleba waa inaan ku dhaqanno istiraatiijiyado taxane ah.
In garoonka diyaaradaha
Garoonka diyaaradaha Düsseldorf
Hay'adaha caafimaadka laftoodu waxay ku taliyeen in la raaco dhowr tilmaam oo looga dan leeyahay yareynta caabuqyada garoomada laga soo bilaabo marka aan galno ilaa aan diyaaradda ka raacno. Xirashada ka sokow maaskaro markasta, waa muhiim inaan safka kujirno masaafo laba mitir ah dadka kale.
Sidaa si la mid ah, markii aad tigidhkaaga geynaysid, waxaad ogaan doontaa in shirkadaha duulimaadyadu ay ku rakibeen qalabka iskaanka si aanad ugu dhiibin shaqaalaha dhulka jooga. Waxay xidhaan gacno gashi, laakiin taabashada gacmahooda waxay noqon kartaa khatar. Guud ahaan, shirkadaha diyaaradaha waxay fududeeyeen habsami u socodka dukumintiyada taxaddar ahaan ka hortagga fayraska 'coronavirus'.
Maamulka caafimaadku wuxuu kaloo kugula talinayaa inaan dhigno alaabteena gaarka ah (boorsada jeebka, telefoonka gacanta, saacada, iwm. shandadaha gacanta. Sidan ayaan uga fogaaneynaa inaan saarno saxaarada balaastigga ah, sidii aan horeyba u sameyn jirnay.
Ugu dambeyntii, waxay sidoo kale kugula talinayaan qaadista jel hydroalkohol Gacmaha. Laakiin, xaaladdan oo ay ugu wacan tahay tallaabooyinka amniga ee ka dhanka ah argagixisada, waa inay ahaadaan dhalooyin yaryar, oo qiyaastii ah 350 mililitir, sida marka aan qaadno kalluunka ama alaabada kale. Nadaafadda gacmaha, waxaa ku habboon inaad dhaqdo ka hor iyo ka dib markaad kantaroolka ka gudubto.
Rakaabka ku jira qolka diyaaradda
Sidoo kale, markii aan gudaha u galno diyaaradda, waxaan qaadi karnaa taxaddarro qaarkood si looga fogaado faafitaanka fayraska. Waxa ugu muhiimsan ayaa ah maaskaro sii markasta. Laakiin sidoo kale waa la talin karaa Ha cunin ama ha cabbin waxa ay naloogu talagalay.
Xaqiiqdii, illaa goor dhow waxay ahayd shirkadaha diyaaradaha laftooda oo aan siin cunno ama cabitaan ahaan taxaddar ahaan. Dareenkan, waa muhiim inaad sidato biyo badan ama cabitaano fudud oo guriga laga helo, gaar ahaan haddii aad samaynaysid duulimaad dheer.
Ku saabsan cuntada iyo cabitaanka, sidoo kale waxaa lagugula talinayaa inaad qaadato boorso hufan. Tani lama xiriirto duulimaadka, laakiin waxay la xiriirtaa xakameynta garoonka diyaaradaha. Haddii aad ku qaadatid shandadaha gacantaada, waa inaad iska bixisaa si amniga uu u arko waxa ku saabsan. Dhinaca kale, weel hufan, waad iska ilaalin doontaa nidaamkan.
Dhinaca kale, ka hor intaadan ku safrin diyaarad ama wax kasta oo gaadiid ah, waa inaad hubisaa shuruudaha la xiriira Covid-19 ee ay ku weydiin doonaan halka aad u socoto. Haddii kale, waxaad ogaan kartaa inaan laguu oggolaan inaad soo gasho waddanka caddeyn la'aan ama inaad sameysid karantiil. Waa muhiim inaad hubiso macluumaadka shuruudaha waddanka ee coronavirus.
Gabagabadii, oo ku saabsan su'aasha ah haddii daawada loo yaqaan 'coronavirus' ay amaan tahay in diyaarad lagu raaco, khubaradu waxay ku heshiiyeen jawaabta si hufan. Sida laga soo xigtay iyaga, diyaaraduhu waa goobo ammaan ah labadeenaba sababtoo ah is qurxinteeda iyo nidaamka nadaafadda hawada ee ay ku darayaan. Kuwan dambe waxay leeyihiin miirayaasha HEPA kuwaas oo awood u leh inay hayaan 99,97% fayrasyada iyo bakteeriyada. Xaqiiqdii, sida ku xusan daraasad ay soo wakiisheen IATA (Ururka Caalamiga ee Gaadiidka Cirka), ilaa bilowgii 2020, kaliya kiisaska 44 ee Covid-19 ayaa lala xiriiriyay safarka hawada. Taasi waa in la yiraahdo, tirada ugu yar haddii aan barbar dhigno meelaha kale ee halista.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Duulista » Coronavirus: Ma nabad baa in lagu safro diyaarad?
Huteelada ugu fiican Punta Cana
Halyeeyga Prague Astronomical Clock